प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दशैंको टीका लगाउने क्रममा एक जना कार्यकर्ताले खुट्टा ढोग्न लगाउनु भएको छ ।
शनिबार, अशोज ३०, २०७८ ५:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दशैंको टीका लगाउने क्रममा एक जना कार्यकर्ताले खुट्टा ढोग्न लगाउनु भएको छ । दशैंको टीका थाप्न आएका एक कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री देउवाबाट टीका ग्रहणपछि दाम राखेर खुट्टा ढोग्नुभएको हो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो शेयर गर्दै यसरी खुट्टामा दाम राखेर ढोगेको दृश्यले राजा र रैती भन्ने पुरानै संस्कार÷प्रवृत्ति दोहोरिएन ? राजाकै शैलीमा उच्च ओहदाका ब्यक्तिले दशैमा टीका लगाइदिने क्रम रोकिएको छैन ।
पुराना शासक हटाए पनि आफैं शासक बन्ने निम्नस्तरको प्रवृत्ति कहिले अन्त्य होला ? यसका लागि जनतापनि सुध्रिनु आवश्यक छ । नेता र जनता दुबै कहिले सुध्रिने ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।
प्रम देउवा : शिक्षालाई वैज्ञानिक र रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ
यूरिका राजभण्डारी - बुधबार, मंसिर १५, २०७८ ६:३०
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, रोजगारमूलक, नवप्रवर्तनात्मक र गुणस्तरीय बनाउन जोड दिएको छ ।